Contact - မောငျပေါကျ ( Maung Pauk )
မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ အခက်အခဲရှိလို့ အကူအညီတောင်းချင်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အကြံပြုလွှာပေးပို့ချင်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Social Network ပေါ်မှာ ချိတ်ဆက်ထားလိုရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ဆက်သွယ်ရမယ့် နေရာတွေကို ဖေါ်ပြပေးပါမယ်.. ကျွန်တော် သိသလောက်၊ ကူညီနိုင်သလောက် ဘယ်သူ့ကိုမဆို ကူညီဖို့ ဝန်မလေးပါဘူး..
1. Facebook : Facebook ပေါ်မှာ ဆက်သွယ်ချင်ရင်တော့ https://www.facebook.com/www.maungpauk.org ဖြစ်ပြီး ဘလော့မှာတင်သမျကို မလွတ်တမ်း အသိပေးစေချင်ရင်တော့ https://www.facebook.com/blog.maungpauk မှာ Like, Follow လုပ်ထားဖို့ လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်..
2. Twitter : Twitter မှာ မလွတ်တမ်း Tweet ချင်ရင်တော့ https://twitter.com/maungpauk မှာ ချိတ်ဆက်ထားနိုင်ပါတယ်...
3. LinkedIn: LinkedIn မှာ ချိတ်ဆက်ထားချင်ရင်တော့ https://www.linkedin.com/in/maungpauk မှာ ချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်..
4. Tumblr : Tumblr သုံးတဲ့သူတွေကတော့ http://maungpauk.tumblr.com/ မှာ ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်...
5. Email : e-mail ကနေ ဆက်သွယ်ချင်ရင်တော့ maungpauk@gmail.com ကို ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်.. ဒါမှမဟုတ် admin@maungpauk.org ကို ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်.. admin@maungpauk.org မှာတော့ သိပ်မဖတ်ဖြစ်ပါ.. ဒါမှမဟုတ်. အောက်က Form မှာဖြည့်ပြီး တိုက်ရိုက် ပေးပို့နိုင်ပါတယ်..
yannaingtun January 23, 2015 at 11:12 PM
huawei g730-coo step2 fail တင်မရလို့ ကူညီပါ
fifa 14downloads လို့ရပါတယ်အစ်ကို ဒါပေမဲ့ extract ဖြေရတယ်ဆိုတာဘယ်လိုလဲ အစ်ကို။ပြောပြပါအုံး။ညက mobogine ထဲက fifa 15 down တာ၇၀၀၀လောက်ကုန်သွားတယ်။ဆော့လို့ရဘူး။ကူညီပါအုံး အစ်ကို
ကိုပေါက် ကျွန်တော့ရဲ့ Huawei ဖုန်းက H30.L02 ပါ Firmware တင်တာ step2 fail ဖြစ်ပြီး ကွန်ပျူတာက ဖုန်းကိုမသိဘူးဖြစ်နေတယ် အဲတာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကူညီပါဦးနော် ကျွန်တော်တို့ရွာက သွားလာရေးခက်ခဲလို့ပါ စာကိုရရချင်း အကြောင်းပြန်ပေးပါခင်ဗျာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မောင်ပေါက် February 16, 2015 at 1:50 PM
ဘယ်ကို အကြောင်းပြန်ရမလဲ မသိဘူးခင်ဗျာ..
Unknown April 24, 2015 at 8:55 AM
komyominaung April 27, 2015 at 2:59 PM
Blogger ပညာနဲ့ပတ်သက်တာတွေ ကိုပိုင် free wadsite လုပ်နည်းတွေ သိချင်ပါတယ်ဆရာ
Facebook email password ​မေ့သွားလို့ကူညီပါဦးဗျာ
Unknown July 5, 2015 at 11:14 PM
အစ်ကို ကူညီပါအုံး...PES 2015 (PC) Play တာ error ပြနေလိုပါ ကူညီပါအုံးနော် error ကthe procedure entry point convertInterfaceLuidtoGuid could not belocated in the dynamic link library IPHLPAPI.DLL ဆိုပြီးပြနေလိုပါ ကျေးဇူးပြု ၍သိရင်ပြောပြပေးပါနော်​
Unknown July 7, 2015 at 3:00 AM
အစ်ကို ကူညီပါအုံး...PES 2015 (PC) Play တာ error ပြနေလိုပါ ကူညီပါအုံးနော် error ကthe procedure entry point convertInterfaceLuidtoGuid could not belocated in the dynamic link library IPHLPAPI.DLL ဆိုပြီးပြနေလိုပါ ကျေးဇူးပြု ၍သိရင်ပြောပြပေးပါနော
Unknown July 7, 2015 at 3:02 AM
အကို mail.ru နဲ့ဖွင့်ထားတဲ့အကောင့် passward မေ့သွားတာပြန်ရှာတော့ ဖုန်းနံပတ်တောင်းတယ်...but မြန်မာ code မပါဘူး..ဒါ့ကြောင့် နိုင်ငံခြား ဖုန်းနံပတ်တခုခုနဲ့ verification code ပြန်ရအောင် လုပ်လို့ရမဲ့နည်းလေး ပေးပါအုန်း...
chann October 14, 2015 at 8:17 PM
SONY Mobile Lock Remove.rar
Anonymous October 22, 2015 at 2:18 PM
HUAWEI G-610-U20 V100R001C00B126 မှာ monkey test ကိုက်တာ Firmwear တင်ချင်လို့ သူ့ထက်မြင့်တာနဲ့တင်ရမယ်ဆိုလုိ့ လိုက်ရှာတာမတွေ့ဘူးဗျာ ကူညီပါအုန်း
အစ်ကိုရေ. oppo R1 ကို lollipop 5.0 တင်ချင်လို့ရလားဗျ.
အစ်ကို ကျွန်တော် game တစ်ခုလောက်တောင်းချင်လို့
full version ကိုတင်ပေးပါဦး
Unknown December 25, 2015 at 3:38 PM
အကိုရေ ကျွန်တော့်ကွန်ပျူတာက Data တွေကို ကွန်ပျူတာထဲမှာသုံးမယ်ဆိုရင် သုံးလို့ရမယ်။ Stick နဲ့ ယူမယ်ဆိုရင်တော့ ယူလို့မရမယ့်နည်းလေးများရှိရင် ပြောပြသင်ကြားပေးပါခင်ဗျာ။
IDM ( Internet Download Manager ) 6.40 Build 11